Money Counter Mixed Denomination Cash & Bills CCM-1000 - CashCounterMachines.com
musha CCM-1000 Imwe Pocket Yakasanganiswa Mari Counter
Verenga Mixed US Dollar Bill Denominations - Macounter emari mazhinji pamusika nhasi anoverenga dhinominesheni rimwe chete panguva. Tenga CCM-1000, isa mabhiri ako ese akasanganiswa kamwechete uye uwane kukosha kwemadhora. Muchina uyu une automatic denomination recognition uye unokupawo mushumo uzere wemasangano ese nemabhiri akaiswa.
Kuonekwa Kwenhema - Mafomu mana ekuonekwa kwemanyepo anosanganisira Ultraviolet, Infrared, Magnetic uye CIS. Misa mabhiri emanyepo uchishandisa tekinoroji ine simba yazvino uno. Muchina unouya neiyo imwe CIS system.
Batch Basa - Chengetedza mari yakarongeka uchishandisa batch basa.
High Speed ​​Bill Kuverenga - Uchishandisa mazana matatu emabhiri hopper uye kumhanya kwekuverenga kwe300 mabhiri paminiti, muchina uyu wakagadzirira kutora zvinodiwa zvekuverenga mari kumabhizinesi mazhinji.
Mari Inotsigirwa -Dhora reUS, Peso yeMexico, Canadian Dollar. Muchina unoona otomatiki mari yaiswa. Hapana chikonzero chekuchinja modes. Ndapota taura nesu kana iwe uchida chero imwe mari yenyika uye isu tinogona kuzvironga nemaoko.
One Year Warranty - Inotsigirwa newaranti yegore rimwe chete inosanganisira zvikamu uye vashandi vanoshandirwa zvizere neCashCounterMachines.com.
100% Kugutsikana Kwakavimbiswa - Tichaita shuwa kuti unogutsikana nekutenga kwako nekupa 30 mazuva ekudzoserwa mari garandi.
Hapana Mutero Wekutengesa Kunze kweCalifornia - Nyika chete yatinotora mutero iCalifornia.
Kutakurirwa mahara - Tora mukana weyedu yemahara UPS pasi yekutumira pakubuda.
Yakaverengerwa kubva ku32 ongororo yevatengi.